Lokanga sy valiha: Krizy ara-pahasalamana, krizy ara-bola, krizy politika | NewsMada
Lokanga sy valiha: Krizy ara-pahasalamana, krizy ara-bola, krizy politika
Misokatra ny làlana, mahazo mivoha ny tsena rehetra, tsy misy intsony ny faritra mikatona. Mbola mitoetra anefa ny hamehana ara-pahasalamana. Ny tsy fahafahana mivezivezy amin’ny alina mbola notazonina fa nahemotra ny ora fampiharana azy. Ny sidina anatiny sy ivelany tsy mbola misy. Ny fiangonana efa afaka misokatra fa tsy maintsy hajaina ny elenelana.
Ireo amin’ny ankapobeny ny fepetra farany nambaran’ny filoham-pirenena taorian’ny fihenan’ny trangan’aretina sy ny fihenan’isan’ireo namoy ny ainy vokatr’ity areti-mandoza Coronavirus ity.
Efa dingana lehibe amin’ny fiverenana tsikelikely amin’ny fiainana andavanandro izany. Tsy mbola ho androany sy rahampitso anefa izany satria mbola mitohy manafika ilay valanaretina. Tsy mbola resy tosika tanteraka izy. Mbola misy ny marary manaraka fitsaboana, misy ny tranga vaovao ary ny mampalahelo, mbola misy ny maty. Ny zava-misy aloha hatreto, efa tonga ary efa naparitaka manerana ny Nosy ny vaksiny andiany voalohany.
Hoy isika tery ambony hoe nisy ny ezaka vita, azo lazaina ihany koa fa nahomby ny paikady nentina niadiana taminy saingy aleo tsy misioka raha tsy mbola tafavoaka ny ala. Amin’ny dingana toy izao mihitsy mantsy no ahiana hampiakatra ambony tampoka ny taha raha toa ka tsy mailo isika. Raha vao manao goragora sy miraviravy tànana dia ho avy izy amin’ny angady sy ny harona. Ririnina ao amin’ilay tena itiavan-dry virus azy rahateo ny andro. Amin’izay fotoana izay dia hiverina hatramin’ny voalohany indray ny raharaha.
Moa tsy tsy fitandremana toy izany tokoa va no nahatonga antsika ho tafiditra tao anatin’ny dingana faharoan’ny Covid-19 na ilay antsoina hoe: “deuxième vague”? Ankoatra ireo narary na namoy havana dia nitondra fahapotehana lehibe teo amin’ny sehatra rehetra ity krizy ara-pahasalamana ity. Ny firenena matanjaka aza moa nifohifohy volo tao anatin’izay roa taona latsaka kely izay, mainka fa isika anatin’ny firenena sahirana ity? Aleo mailo fa tsy hay intsony izy ity.
Efa niresaka volo ihany teo ka aleo tohizana amin’izany ihany aloha ny tafa. Niarahan’ny maro nahita angamba ilay sary niparitaka tamin’ny tambajotra sosialy izay nitantara ny nahazo ilay tovovavy nisy nanapaka volo teny amin’ny manodidina ny 67 Ha. Nambarany fa nisy nikasika ny lohany dia tsy nahatsiaro tena izy raha tsy ny volony efa teo. An-dranomaso izy mitantara. Nisy hafa ihany koa ny mpanao facebook izay nijoro vavolombelona fa nisy olona nanaraka azy ary nangataka hividy ny volo lavany. Dia volabe tokoa anefa no nanambazany azy. Soa fa tafatsoaka ilay tovovavy.
Asa, tsy fantatra aloha hatreto hoe atao inona ilay volo lava? Fa na ahoana na ahoana dia mampiseho izany fa misy foana ny maramara saina manararaotra ny fahasahiranan’ny maro ao anatin’izao krizy izao mba hahazoam-bola. Santionany fotsiny amin’ny endrim-panararaotana misy eo amin’ny fiaraha-monina izany. Izany anefa no tsy mahataraiky sy tsy mahatafavoaka antsika eto. Tsy vitan’ny efa mahantra ara-bola isika fa mbola mahantra ara-tsaina ihany koa. Fa misy ihany koa ireo azo lazaina fa manan-katao ihany nefa tsy mety afa-po amin’izay ananany fa tsy manan-tsaina afa-tsy ny hitsetsitra ny hafa hatrany. Sady efa ory hava-manana no tsy tia havana ory.
Miaina anaty krizy ny rehetra. Etsy an-kilany, mamely ny aretina, manao ny ataony ny fiaraha-monina. Ny mpanao politika sasany ihany koa etsy an-daniny manome…krizy. Mila miova isika Malagasy fa raha tsy izany dia ho taraiky eto. Asio maso ireo nosy manodidina antsika. Na samy miatrika krizy aza, ry zareo toa efa lasalasa daholo.